Telefoonada ugu wanaagsan ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis
Ma dooneysaa inaad wax walba ka ogaato moobiillada cusub ee suuqa ku dhacay Android? Ma waxaad raadineysaa mobilo cusub oo aad rabto inaad hesho macluumaad aad ku doorato si ka wanaagsan? Halkan waxaad awoodi doontaa inaad marin u hesho dhammaan macluumaadka ku saabsan telefoonnada gacanta ee suuqa ku gaadha Android. Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad waxbadan ka ogaato iyaga qaab aad u fudud.
News, dib u eegis ama qeexitaannada dhammaan noocyada taleefannada Android, laga bilaabo noocyada waaweyn ee suuqa, iyo sidoo kale soo saarayaasha cusub ee imanaya dukaamada. Qeybtaan waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho wax kasta oo aad rabto inaad ka ogaato telefoonadan Android. Ha moogaan midkoodna wararkaas.
Maxay tahay taleefanka gacanta ee Android inuu iibsado?
Si lagaaga caawiyo inaad doorto mustaqbalkaaga mobilada, hoosta waxaad ka heli doontaa xoogaa hageyaal gadasho ah oo aad ku dooran karto midka kuugu habboon baahiyahaaga. Kee doorbideysaa
Mobiles-ka ugu fiican 2018
Top 10 mobiles ee 2017
10-ka mobilada ugu fiican suuqa
Mobiles-ka dhexdhexaadka ah
Telefoonada wax ka yar 300 euro
Mobiles-yada ugu fiican wax ka yar 200 euro
Telefoonada Shiinaha oo ka yar 100 Euro
Marka loo eego astaamaheeda
Mobiles-yada ugu fiican ee leh Android One
Telefoonada leh kamarada ugu fiican
Telefoonada gacanta ee Android
Haddii aad si cad uga cadahay astaanta mobilkaaga soo socda ee Android, liistada soo socota waxaad ka heli doontaa wararkii ugu dambeeyay iyo bilaabista shirkadaha moobilada Android ee adduunka ugu muhiimsan.
Kuwani waa soosaarayaasha ugu wakiilka ah illaa inta moobiillada Android ay khuseeyaan. Waxaa jira shirkado badan oo soo saarayaal ah, gaar ahaan Shiinaha, laakiin qaab ahaan kuwani waa kuwa ugu badan ee iibiya dadka isticmaala nidaamka mobilada ee Google.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan telefoonnada gacanta ee Android
Huawei P50 mar horeba waa dhab: ogow astaamaheeda, qiimaha iyo bilowga rasmiga ah
by DaniPlay samee 2 maalmood .
Huawei ayaa ugu dambeyntii maanta ku dhawaaqday labada taleefan ee taxanaha cusub ee P50. Waxaa jiri doona laba calan oo loogu talagalay ...
Xiaomi Poco X3 GT: mobilada ciyaarta cusub ee leh shaashadda 120 Hz iyo Dimensity 1100
by Haaruun Rivas samee 2 maalmood .
Xiaomi waxay suuqa ku soo bandhigtay taleefan casri ah oo casri ah qeybta ciyaaraha, waana Poco X3 GT….
Redmi Note 10T, moobayl sida Redmi Note 10 5G ah, laakiin leh 4G
by Haaruun Rivas samee 1 bishii .
Xiaomi waxay suuq cusub ka hirgalisay terminaal wax-qabad dhexdhexaad ah, kaasoo u imanaya sidii 'Redmi Note 10T'. Bariga…
Realme Narzo 30 5G vs Realme GT 5G: isbarbardhiga saxda ah
by DaniPlay samee 1 bishii .
Soo saaraha Aasiya Realme waxaa loo aasaasay sanado inuu yahay mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan, isagoo ku bixiya moodallo kala duwan qiimo ...
Maalinta Amazon Prime Day 2021 waxay ku bilaabatay dalabyo badan oo xiiso leh oo ku saabsan teknolojiyadda, otomatiga guriga iyo guriga, iyo kuwo kale oo badan ...
Poco M3 Pro, Redmi Note 10S iyo Redmi Note 10 Pro oo ah qiimo aan laga hor istaagi karin
Qalabka mobilada iyo saacadaha casriga ah ayaa culeys ka helayay suuqa, labo ka mid ah wax soo saarka ayaa ah ...
Ma jiro wax sida nidaamka qalliinka kaamil ah. Sidoo kale ma jiro nidaam hawlgal oo sugan oo 100% ah. Dhamaan nidaamyada hawlgalka waa kuwo u nugul ...
by DaniPlay samee Bilaha 2 .
OnePlus waxay ku dhawaaqday waxa ay tahay noocyadeeda cusub ee soo galida kadib xanta badan ee ku saabsan astaamaheeda, ...
Kusoo qaado Poco M3 Pro qiimaha ugu fiican adoo adeegsanaya soo bandhigiddan
Pocophone wuxuu noqday soo saare leh qalab fara badan oo suuqa yaala oo ay tahay inuu tixgaliyo ...
Haddii aad raadineyso taleefan leh kamarad weyn, ha moogaan Cubot X50
by DaniPlay samee Bilaha 3 .
Taleefanka casriga ah ee kamarad sare, Cubot X50, ayaa ugu dambayn maanta la iibinayaa….
Cubot X50: taleefanka casriga ah ee afar geesoodka ah ee 64 MP oo ah qiime jaban
Waa muhiim inaad maanta haysato kaamirad fiican. In kasta oo kamaradda casriga ahi aysan sidaa ahayn ...
New Lenovo S5 Pro: 6.3 ″ FHD + guddi, SD636 iyo in ka badan
Xiaomi Black Shark 2 horeyba wuxuu u lahaa taariikh soo bandhigid
Taariikhda la bilaabayo ee OnePlus 6T ee Yurub hadda waa rasmi
Sida loo soo dejiyo mawduucyada MIUI, oo ay ku jiraan MIUI 10
[APK] Sida loo rakibo Xiaomi Mi Emoji
ZTE Axon 9 Pro waa rasmi: 6.21-inch AMOLED, Snapdragon 845, Android 8.1 Oreo iyo inbadan
ZTE waxay soo bandhigi doontaa Nubia Z18 tan bisha Sebtember 5teeda
HTC U12 + wuxuu bilaabay inuu yeesho cusbooneysi cusub oo dhowr horumarin ah iyo CryptoKitties ah
Lenovo wuxuu ku dhawaaqay 5 kiniin oo cusub oo Android ah iyadoo seddex ay yihiin Android Go Edition
BQ Aquaris C ayaa la bilaabay: muuqaalka HD +, Snapdragon 425, Android 8.1 Oreo iyo inbadan
Xaqiijiyay: ZTE wuxuu soo bandhigi doonaa Axon 9 bisha soo socota ee Ogosto 30
OnePlus 6T wuxuu imaan lahaa Oktoobar oo leh qiimo koror
Sony Xperia XA3 Plus ayaa ka muuqda Geekbench: faahfaahinta muhiimka ah ayaa la muujiyay
Kala shaandheeyay tiirarka ugu horreeya ee Moto P30